विभिन्न समस्या समाधान गर्नका लागि फिटकिरीको प्रयोगको बारेमा सबैले जानिराखौँ ! यति धेरै रोगको उपचारको लागि काम लाग्छ – Annapurna Daily
On Jun 17, 2021 14,343
वर्षौँ देखि हामी घरमा फिटकिरीको प्रयोग गर्दै आएका छौँ । फिटकिरीमा एन्टी ब्याक्टेरियल गुण हुन्छ । आयुर्वेदमा फिटकिरीलाई एक महत्वपूर्ण औषधी मानिन्छ । आज हामी फिटकिरीले दिने फाईदाको बारेमा जानकारी दिनेछौँ ।
घाउ/चोट लाग्दा: यदि तपाईलाई केही घाउर चोट लागेको छ र रगत बगिरहेको छ भने फिटकिरी पानीले घाउ धुनाले रगत बग्न रोकिन्छ ।
अनुहारको चाउरीपन हटाउनको लागि मद्दत गर्छ: यदि तपाईको अनुहारमा चाउरीपन देखिएको छ भने फिटकिरी पानीको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ । फिटकिरीको टुक्रालाई डुबाएको पानीले हल्का अनुहार मसा जगर्ने र केही समय पछि सफा पानीले धुने गर्नाले चाउरीपन कम हुन्छ ।
पसिना गन्हाउने समस्याबाट छुटकारा पाउन: यदि तपाईको शरीरमा पसिना गन्हाउने समस्या छ भने फिटकिरीको धुलोलाई नुहाउने पानीमा घोल्ने र सोही पानीले नुहाउने गर्नाले समस्या समाधान हुन् छ।
दाँतको समस्याको लागि: फिटकिरीमा एन्टि ब्याक्टेरियल गुण पाईन्छ । त्यसैले दाँतको दुखाईमा फिटकिरी पानीले कुल्ला गर्ने गर्नुपर्छ ।
दम, खोकीको समस्या समाधान: दमको रोगीको लागि फिटकिरी रामबाण सावित हुन्छ । फिटकिरीको धुलोलाई महसँग मिसाएर चाट्ने गर्ने हो भने दम तथा खोकी हुन्छ ।
जुम्रा मार्ने घरेलु उपाय: यदि कपालमा जुम्रा परेर आत्तिनुभएको छ भने फिककिरी पानीले कपाल नुहाउने गर्नुपर्छ ।
पिसाब संक्रमण समाधानको लागि: पिसाब संक्रमण भएको व्यक्तिले हरेक दिन फिटकिरी पानीले यौनांग सफाई गर्ने हो भने यो समस्याबाट छुटकारा मिल्छ ।
यो पनि पढ्नुस : राति सुत्नुअघि नियमित ल्वाङ खाऔँ अनि हेरौँ चमत्कार, यस्ता रोगका लागि रामबाण औषधि हो ल्वाङ !
इम्युन सिस्टम वृद्धि: ल्वाङमा इम्युन बुस्टर हुन्छ जसले शरीरको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउन सहयोग गर्छ । ल्वाङको नियमित सेवनले कमजोरी हट्छ ।
हातगोडा काम्दैन: कतिपयमा हातगोडा काम्ने समस्या हुन्छ । यस्तो समस्या छ भने हरेक रात सुत्नुअघि १–२ वटा ल्वाङ चपाएर खानुपर्छ । केही दिनपछि हातगोडा काम्ने समस्या निर्मूल हुन्छ ।
अन्य समस्यामा: टाउको दुखेको छ घरमा अन्य औषधि छैन, भनेपछि के गर्ने ? यस्तोमा २–३ वटा ल्वाङ पिसेर मनतातो पानीसँग स्वाट्ट पिइदिनुपर्छ । केही बेरपछि नै राहत महसुस हुन्छ । कतिपय मानिसको आँखाको सेतो भागमा समस्या हुन्छ जसका कारण उनीहरूको दृष्टि कमजोर हुन्छ । यस्तो अवस्थामा तामाको भाँडामा ल्वाङ पिसेर त्यसमा थोरै मह मिसाई खानुपर्छ । फाइदा गर्छ ।